दर्शन (Philosophy) के हो
१) दर्शन (Philosophy) के हो फिलोशोफी युनानी भाषा बाट आएको शब्द हो । जसको शाब्दिक अर्थ Æ philo (फिलियो) को प्रेम र Sophy ( सोफिया) को अर्थ विवेक गरी दर्शन को अर्थ प्रेम र .....
राजनीति चर्चा, हँसाउने कमरेड,देश हाँक्ने काँग्रेस
नेपाली राजनिति अहिले चिया पसल देखी चुलो चौका सम्म चर्चाको बिषय भएको छ । नहोस् पनि कसरी सरकारमा र सडकमा एउटै पाटीका मान्छे, उनिहरुनै जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउछन् । समग्रमा हेर्नेहो भने वर्तमान .....
१ पहिचान भनेको के हो ? सामान्यतय पहिचान भन्नाले बहु– अस्तित्वको स्वीकृति लाई जनाउदछ । पहिचान परिवर्तन र अधिकार प्राप्ती को आन्दोलनको महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । भिन्न भिन्न पक्षहरुको बीचमा हु .....
संघीयता र नेपाल
१ संघीयता (Federalism) के हो ? Federalism शव्द ल्याटिन भाषाको 'Foedus' बाट आएको हो। यसको खास अर्थ pact, union, treaty or contract भन्ने हुन्छ। शाव्दिक अर्थ वा उत्पत्तिको हिसाबले सन्धि, सम्झौता .....
व्यवस्था प्रतिको वितृष्णा किन ?
प्रस्तुत आलेखको शीर्षक अनुसार अड्डामा एक दिन कर्मचारीको नभई एक सामान्य सेवाग्राहीको रुपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको र अधिकारका दृष्टिकोणले सर्वसम्पन्न एक नागरिकको हो । नेताहरुले भने .....
म्यासेन्जरमा महिलामाथि पुरुषको दुराचार कहिले सम्म ?
‘हेल्लो’शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा म्यासेन्जरमा एउटा म्यासेज आयो । यो म्यासेज पढ्दा नपढ्दै ‘हेल्लो के छ खबर ?’ भन्ने अर्काे म्यासेज आयो । सामान्य बोलचालमा सोधिने प् .....
मोटरबाट झरेर पहिलो पाइला टेक्दा तिमी जुठो बारेर बसेका थियौ । देशले शोक मनाइरहेका बेला तिमी किन अछुतो हुँदा हौ र ? सडकमा ओहोर दोहोर गर्ने हरेकजसो मानिस तालुचिण्डे देखिन्थे । इटहरी चौकमा मानिसको ओहोदोहो .....
सडकमा पन्चे मण्डलेहरुको यो कस्तो गाइजात्रा ?
लोकतन्त्रमा व्यक्ति असफल होलान तर यस व्यवस्थामा विकल्प जस्तो सुन्दर पक्षको उच्च स्थान हुने गर्दछ । के केपी ओली एक व्यक्ति सरकार र पार्टी दुवैमा असफल हुँदैमा व्यवस्था को दोष हुन्छ त ? त्यो कदापी हुन सक .....
किन गिर्दै छ प्रहरीको साख (टिप्पणी)
सत्य सेवा सुरक्षणम् को नारा बोकेको नेपाल प्रहरी पछिल्लो केही समय यता निरन्तर विवादको घेरा भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । हुन त नेपाल प्रहरीमा कार्यसम्पादनका हिसाबले एक से एक प्रहरी अधिकृत नभएका होइनन तर .....
इटहरीका सबै विद्यालय खोलौं (सम्पादकीय)
कोरोना कहरको प्रभावका दृष्टिकोणले सायद कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेको छैन । कसैले पनि परिकल्पना नगरेको विपत्ति र यसका असरहरु विश्वभर देखिईरहेका छन् । संक्रमण अझै रोकिएको छैन बद्दो क्रममा छ । अहिले .....